Sidee si ay u gudbiyaan fariimaha qoraalka si ay u New Phone
> Resource > Transfer > Sidee si ay u gudbiyaan fariimaha qoraalka si ay u New Phone
Hi, waxaan dhawaan la casriyeeyay aan phone in Galaxy Sii a ka ah Samsung GT-S3350. Ma suroobi karaa waddo fariimaha qoraalka ah aan (mailkooda iyo Sentbox) waxaan ku wareejin karaa ka-GT S3350 inay Sii Galaxy? Waxaan hadda isticmaalay barnaamijka Samsung Kies si ay u gudbiyaan aan Xiriirada, Music iyo Pictures, laakiin waxaa jira uma muuqato in ay doorasho kasta gudahood barnaamijka si ay u gudbiyaan farriimo qoraal ah. Runtii waxaan jecelahay talooyin wax? Thanks.
Ka dib markii taleefanka cusub, sida Android phone ama iPhone, oo aad jeceshahay waxaa laga yaabaa in ay u gudbiyaan fariimaha qoraalka macluumaad muhiim ah ama xasaasi ah ka telefoonka jir ah, waxa uu. Sidaa darteed, waxaad ka akhrisan kartaa fariimaha qoraalka ah ee aad taleefan cusub. Si aad u gudbiyaan fariimaha qoraalka ah si ay u phone cusub, ee aadka aad aad ku talin ah kala iibsiga phone qalab hal-click - Wondeshare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac . Waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu caawiyo in aad wareejiso xogta u dhexeeya telefoonada iyo kiniiniyada socda macruufka, Symbian iyo Android. Iyada oo ay caawimo, aad wareejin karaan farriimaha qoraalka ah oo dhan ee aad taleefan Android jir, phone Nokia oo iPhone in telefoonka cusub Android ama iPhone in mid ka mid click.
Download qalab si ay isugu dayaan in ay telefoonka ku cusub wareejinta fariimaha qoraalka ah. Halkan, waxaan jeclaan lahaa in la siiyo version Windows tallaalka ah.
Fiiro gaar ah: MobileTrans si buuxda u badan telefoonada iyo kiniiniyada socda Android, Symbian iyo macruufka (macruufka 9 ka mid ah). Hubi halkan si aad u hesho more info.
Sidee si ay u gudbiyaan fariimaha qoraalka ah si telefoonka cusub
Tallaabada 1. Orod this phone qalab kala iibsiga kombiyuutarka
Si aad u bilaabaan oo leh, rakibi oo ay maamulaan MobileTrans kombiyuutarka. Suuqa ayaa aasaasiga ah ayaa la soo bandhigi doonaa shaashadda kombiyuutarka. Riix Phone in Transfer Phone . Tani waxay kor u soo Bixiyaa suuqa kala iibsiga telefoonka.
Fiiro gaar ah: Si aad xog ama ka iPhone (iPhone 6S Plus, iPhone 6S taageeray), iPad iyo iPod wareejiyo, waa in aad la rakibi Lugood kombiyuutarka.
Tallaabada 2. Isku aad telefoonada jir ah oo cusub si ay u kombiyuutarka
Sida aan kor ku soo sheegnay, MobileTrans kuu ogolaanaysaa inaad dhoofin SMS ah oo ku saabsan Nokia phone jir, phone Android iyo xataa iPhone, ka dibna iyaga nuqul aad iPhone ama Android cusub telefoonka. Sidaas, xirmaan laba telefoonada in aad rabto in aad kala iibsiga SMS in kombiyuutarka la fiilooyinka USB. Ka dib markii la ogaado, telefoonka jirkaan ayaa la tusay bidix, sida telefoonka isha la odhan jiray, iyo telefoonka cusub Android ama iPhone, phone caga muuqataa on xaq.
"Data Clear hor nuqul", tab hoostiisa ku phone Ahaado, waxaa loo isticmaalaa in lagu cadeeyo sanduuqa SMS hadda telefoonka caga hor nuqul. Waxaa hubi marka aad go'aansato inaad keliya maahee SMS ka phone hore. Ka sokow, "Flip" dhexeeya laba taleefan kuu ogolaanaysaa inaad bedesho meelaha ka mid ah laba telefoonada.
Tallaabada 3. qoraalka Transfer in phone cusub
Ka sokow fariimaha qoraalka ah, MobileTrans awood aad si ay u gudbiyaan files kale, sida xiriirada, muusig iyo sawiro. Sidaa darteed, ka saar marks ka hor files kale marka aad rabto inaad u guurto fariimaha qoraalka ah si ay telefoonka cusub. Markaas, guji "Start Copy". Fadlan marnaba barkinta Ama telefoon ka hor inta suuqa kala iibsiga loo sameeyo. Marka lagu sameeyey, guji "OK"
Video ku saabsan yahay wareejinta SMS si phone cusub
Isku day MobileTrans si ay u gudbiyaan farriimo qoraal jir ah u phone cusub.